तपाईंलाई थाहा छ ? जिंकले रुघाखोकी लाग्नबाट बचाउँछ, कसरी खाने ? « Sansar News
तपाईंलाई थाहा छ ? जिंकले रुघाखोकी लाग्नबाट बचाउँछ, कसरी खाने ?
२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०९:४२
सन्सारन्युज । खानामा पाइने जिंकले रुघाखोकीबाट बच्न र यसका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ । नयाँ अनुसन्धानले रुघाखोकी लागेको अवस्थामा जिंकको सप्लिमेन्ट खाँदा २ दिनमा निको हुनसक्ने बताएको छ । वेस्टर्न युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो हालैको अनुसन्धानमा यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
जिङ्कले संक्रमणको दर कम गर्नुका साथै रोग लाग्ने समय पनि कम गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको दाबी छ । वेस्टर्न युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणलाई जोड्ने दर्जनभन्दा बढी अध्ययनहरूको जाँच गरे। यस बाहेक उनको आफ्नै अनुसन्धानले जिङ्कले रुघाखोकी र रुघाखोकीको लक्षणलाई पनि कम गर्न सक्ने देखाएको छ । यसले नाक बग्ने, टाउको दुख्ने र शरीरको तापक्रम बढेको कम गर्न सक्छ।
जिंक के हो, किन महत्त्वपूर्ण छ र अनुसन्धानमा के के नयाँ कुरा बाहिर आयो, जान्नुहोस् यी प्रश्नको जवाफ
जिंकले शरीरमा के गर्छ ?
जिंक एक पोषक तत्व हो जसले शरीरमा धेरै कार्य गर्दछ। यसले शरीरको प्रतिरक्षा बढाउन, पाचन सुधार गर्न र सूजन रोक्न मद्दत गर्दछ। जिंक मासु, शंख र चीजमा राम्रो मात्रामा पाइन्छ।
बेलायतको स्वास्थ्य एजेन्सी एनएचएसका अनुसार पुरुषले ९.५ मिलीग्राम र महिलाले ७ मिलीग्राम जिंक प्राप्त गर्दछन् । विज्ञहरू भन्छन्, यदि तपाईले जिंक सप्लिमेन्ट लिइरहनुभएको छ भने तोकिएको मात्राभन्दा बढी नलिनुहोस्। यसो गर्नाले शरीरमा आइरनको कमी हुन सक्छ र हड्डी कमजोर हुन सक्छ।
अनुसन्धानबाट के तथ्य बाहिर आयो त ?
अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले ५५०० व्यक्तिमा जिंकको २८ वटा परीक्षण गरेको थियो । अनुसन्धानले रुघाखोकी र रुघाखोकीका बिरामीलाई मुख वा नाकको स्प्रेबाट जिंक खुवाउन सकिने देखाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा जसलाई जिङ्क दिइएको थियो, उनीहरुको अवस्था २ दिनमै सुधार भएको थियो । त्यसैगरी, जिंक नखाएका बिरामीमा सातौं दिनसम्म लक्षण देखापरेको थियो। शोधकर्ताहरुका अनुसार रुघाखोकी निकै गम्भिर स्तरमा पुगेमा जिङ्कको दैनिक सेवनले लक्षण भने कम गर्दैन तर तेस्रो दिनदेखि नै यसको प्रभाव देखिन थाल्छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुको दाबी : जिंकमा कुनै देखिने साइड इफेक्ट छैन
अनुसन्धानका अनुसार अध्ययनका क्रममा कुनै पनि बिरामीमा जिंकको साइड इफेक्ट देखिएको छैन । त्यसकारण, यो भन्न सकिन्छ कि चिसोखोकी उपचारको लागि प्रभावकारी विकल्प खोज्नेहरूका लागि जिंक राम्रो साबित हुन सक्छ। तर, यो अनुसन्धान थोरै मानिसमा भएको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । यो ठूलो मात्रामा गर्न आवश्यक छ।
जिङ्कको कमीलाई खानमा यी ५ कुराले पूरा गर्न सकिन्छ
१) तरबूजाको दाना : यसमा जिंक र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। तपाईं तरबूजाको बीउलाई सुकाएर पिसेर आफ्नो खानामा थप्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक दैनिक एक मुट्ठी ड्राई फ्रुट खान सक्नुहुन्छ ।
२) माछा : यसमा जिंक, प्रोटिनका अतिरिक्त धेरै पोषक तत्व पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यो हप्तामा दुई पटक खान सकिन्छ। जिंकले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
३) अण्डा : एउटा अण्डामा ५ प्रतिशतसम्म जिंक हुन्छ। विज्ञहरू भन्छन्, यसलाई हरेक दिन आफ्नो आहारमा समावेश गर्नुहोस्। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै क्षतिग्रस्त मांसपेशीलाई पनि मर्मत गर्छ ।
४) दुधजन्य पदार्थ : यदि तपाई मांसाहारी हुनुहुन्न भने तपाईले डाइटमा दुधजन्य पदार्थको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्ताको कमी दूध, चिज, दहीले पनि पूरा गर्न सकिन्छ।
५) कालो चकलेट : यसले जिंकको कमीलाई मात्र पूरा गर्दैन तर महिनावारीको दुखाइबाट पनि राहत दिन्छ। डार्क चकलेटले मेटाबोलिज्मलाई सुधार्छ र मुडलाई खुसी राख्छ